နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခွင့်အလမ်းများ ပေါ်လာအောင် ဆောင်ရွက်ပေးရေး တိုက်တွန်းကြေ? - Yangon Media Group
နိုင်ငံခြားရင်းနှီး မြှုပ်နှံမှုအပိုင်းတွင် အားနည်းချက်၊ လိုအပ်ချက်များ ရှိနေဆဲဟု ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ချိုချိုကပြောကြားကာ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခွင့်အလမ်းများပေါ်လာအောင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန် တိုက်တွန်းကြောင်း အဆိုတင်သွင်းခဲ့ရာ လွှတ်တော်ကလက်ခံ ဆွေးနွေးမည်ဟုဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
ဇန်နဝါရီ ၂၂ ရက် ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးတွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်ချိုချိုက နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု လျင်မြန်စွာချောမွေ့ လွယ်ကူစွာဝင်ရောက်နိုင်ပြီး လုပ်သားအင်အားအခြေပြုသော ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းများ ပိုမိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ကျယ်ပြန့်လာစေရန်အတွက် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု အခွင့်အလမ်းများပေါ်လာအောင် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးရန် ပြည် ထောင်စုအစိုးရအား တိုက်တွန်းကြောင်း အဆိုတင်သွင်းခဲ့ပြီး ယင်းသို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ အလွယ်တကူ ဝင်ရောက်နိုင်ရေး၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန် စိတ်ဝင်စားလာစေရေးအတွက် မှတ်ပုံတင်ရန် လွယ်ကူစွာ ပြုလုပ်ပေးထားခြင်း၊ အမြတ် ဝေစုကို မိခင်တိုင်းပြည်သို့ လွယ်ကူစွာ ပို့နိုင်ရန် လုပ်ပေးထားခြင်း၊ ယခင်က နိုင်ငံသားနှင့် နိုင်ငံခြားသား လုပ်ငန်းရှင်ခွဲခြားထားသော်လည်း ယခုတန်းတူအခွင့်အရေးများ ပေးထားခြင်းစသည့် မြန်မာနိုင်ငံကုမ္ပဏီများဥပဒေကိုလည်း အစိုးရသစ် လက်ထက်တွင် ဆောင်ရွက်ထားကြောင်း ဒေါ်ချိုချိုက ပြောသည်။
”ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေဟာ အားနည်းချက်တွေ၊ လိုအပ်ချက်တွေ ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက် စာရွက်ပေါ်က ကိန်းဂဏန်းထက် တကယ်လက်တွေ့ လည်ပတ်နိုင်မှသာ စီးပွားရေးကို တကယ်တိုက်ရိုက်သွားပြီး သက်ရောက်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဒေါ်ချိုချိုကဆိုသည်။ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတိုးမှသာ ထုတ်ကုန်လုပ်ငန်း တိုးတက်၊ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများပြား၊ ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားကိစ္စ ဖြေရှင်းနိုင်၊ ပို့ကုန်တိုးတက်၊ ပြည်ပတင်သွင်းမှုသွင်းကုန် လျော့နည်း စသည့်အကျိုးများရှိမည်ဟု ၎င်းကပြောသည်။ ”ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ပိုမိုများပြားလာတယ်ဆိုပေမယ့် ပြည်ပ ကို အလုပ်သွားရောက်လုပ်ကိုင်နေသူများကလည်း တစ်နေ့ထက်တစ်နေ့များပြားနေ ခြင်းကြောင့် လုပ်သားဦးစားပေး နိုင်ငံတကာ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအား ဖိတ်ခေါ်သင့်ပါတယ်”ဟု ဒေါ်ချိုချိုက အကြံပြုသည်။ နိုင်ငံခြားဝင်ငွေအဖြစ် စွမ်းအင်ကဏ္ဍမှအများဆုံးရရှိကာ စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍမှ အနည်းဆုံးဖြစ်နေခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုကဏ္ဍ အားကောင်းမောင်းသန် ဖွံ့ဖြိုး မလာသဖြင့် ပို့ကုန်ပမာဏမြင့်မားရန် ရုန်းကန်နေရကြောင်း သိရသည်။
ဒေသအသီးသီးတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများ ဖြစ်လာရန် ဖွံ့ဖြိုးမှုဒေသအလိုက် အခွန်ကင်းလွတ်ခွင့်များ ပေးသင့်ကြောင်း၊ ဝယ်အားနှင့် ရောင်းအား မညီမျှမှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ် နေသော မြေဈေးပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် စက်မှုဇုန်အသစ်များ တည်ဆောက်ရန် မြေ လွတ်မြေရိုင်းများ ဖော်ထုတ်ပေးသင့်ကြောင်း ဒေါ်ချိုချိုက အကြံပြုသည်။ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးထွန်းထွန်းက ”ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာ ၂ဝ၁၈ ခုနှစ် စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရအခက်ခဲဆုံး နိုင်ငံစာရင်းမှာ ပါဝင်နေတာကို တွေ့ရ ပါတယ်။ ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ နိုင်ငံတွေကို တိုင်းတာရာမှာ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာ ကုန်သွယ်မှု လွတ်လပ်မှုအဆင့် ၁ဝ၅၊ ငွေကြေးဆိုင် ရာ လွတ်လပ်မှုအဆင့် ၁၄၃၊ ဘတ်ဂျက် ကြွေးမြီအဆင့် ၁၃ဝ၊ အမြတ်ခွန်ဆိုင်ရာ ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်မှု အဆင့် ၁ဝ၁ ဖြစ်ပြီး၊ စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်ရ အခက်ခဲဆုံးနိုင်ငံစာ ရင်းရဲ့ အဆင့် ၂၂ မှာ ရှိနေပါတယ်”ဟု ပြောကာ အဆိုကို ထောက်ခံခဲ့သည်။ အဆိုကိုဆွေးနွေးရန် သဘောမတူသူ မရှိသဖြင့် လက်ခံဆွေးနွေးမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဆွေးနွေးလိုသော ကိုယ်စားလှယ်များ အနေဖြင့် ဇန်နဝါရီ ၂၃ ရက် နောက်ဆုံးထား အမည်စာရင်းတင်သွင်းရန် လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌက ကြေညာခဲ့သည်။
မြို့ဝင်ကြေး ကောက်ခံနေမှုများ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာဖြင့် တစ်ပြေးညီ ဖျက်သိမ်းသင့်ဟု လွှတ
မန်းသင်္ကြန်တွင် နည်းပညာ တက္ကသိုလ်နှစ်ခု ပူးပေါင်း၍ သံချပ်၊ ယိမ်းနှင့် အလှပြယာဉ်တို့ဖြင့် ပါ??
မိမိကို ဆေးလိပ် ဖြတ်စေနိုင်မည့်သူ တစ်ဦးတည်းသာ ရှိဟု ဆာရီ ဖွင့်ဟ
တောရိုင်း တိရစ္ဆာန် အသားများနှင့် အတူ အမိုနီယမ်နိုက်ထရိတ်များ ဝယ်ယူ သိုလှောင်ရောင်းချသူကို